Biixi Oo Daah Furay Wajiga Labaad Ee Mashruuca Sanduuqa Horumarinta SDF.(Sawiro) – Heemaal News Network
Biixi Oo Daah Furay Wajiga Labaad Ee Mashruuca Sanduuqa Horumarinta SDF.(Sawiro)
Madaxweynaha maamulka Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay wejiga labaad ee mashaariicda Sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF.
Munaasibadda uu madaxweynuhu ku daah-furay wejiga labaad ee mashaariicda Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) oo ay gadh-wadeen ka tahay wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta qaranka Somaliland, ayaa waxa kala qaybgalay Xubno kamid ah golaha wasiirrada, madax ka socotay dalalka Somaliland ka taageera Sanduuqan ee Denmark, Holland iyo Ingiriiska, iyo masuuliyiin kala duwan.
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi oo si rasmi ah u daah-furay wejiga labaad ee mashruuca sanduuqa horumarinta Somaliland, ayaa dawladaha Somaliland ka taageera dhinaca horumarka ee sida tooska ah sanduuqan lacagta ugu shuba ee kala ah Ingiriiska, Denmark iyo Dawladda Netherland, kuwaas Somaliland ku taageeray sidii ay dhaqaale ugu heli lahayd fulinta mashaariicda horumarineed ee Qaranka.
Madaxweynuhu waxa uu caddeeyey inay Somaliland ka go’an tahay in mashaariicda kala duwan ee dunidu ku taageertaa u socdaa hannaan daah-furan oo cid waliba arkayso nidaamka ay hawluhu socdaan oo aanu marnaba imannin wax shaki ahi,
“Waxa dawlad ahaan naga go’an in mashaariicda horumarineed ee Somaliland lagu taageerayaa ay dhammantood maraan waddadii loogu talo galay oo aanay xagga Somaliland ka imannin wax dhaliil ahi, haddii ay dhaqaalaha tahay iyo haddii ay maamulka tahayba. Waxa kale oo naga go’an inaannu waddamada na taageera iyo dawladaha na taageera u caddaynaynaa inaanu doonayno inay wada-shaqaynteennu noqoto mid daah-furan oo labada dhinacba arki karaan sida ay hawshaasi u socoto maamul ahaan iyo dhaqaale ahaanba,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Hirshabeelle Oo Safiirka Ingiriiska Somaliya kala Hadashay Doorashada Maamulkaasi.
Gabar Somali ah Oo ku Guuleysatay Tartanka Quruxda Haweenka Muslimiinta Mareykanka.